शुक्रबार सुनको मूल्य बढ्यो, कतिमा कारोबार हुँदैछ ? हेर्नुहोस् – Hamrosandesh.com
शुक्रबार सुनको मूल्य बढ्यो, कतिमा कारोबार हुँदैछ ? हेर्नुहोस्
साताको अन्तिम दिन आज (शुक्रबार) नेपाली बजारमा सुनको बढेको छ ।
आज छापवाला सुन प्रतितोला ९४ हजार ९ सय रुपैयाँ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । सुन बिहिबार ९४ हजार ५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । शुक्रबार सुन प्रतितोला ४ सय रुपैयाँले बढेको हो ।
यस्तै, आज तेजावी सुन प्रतिताेलाकाे ९४ हजार ४ सय रुपैयाँ कायम भएको छ ।
त्यसैगरी, चाँदी भने प्रतितोला १ हजार २ सय रूपैयाँ कायम भएको महासंघले जनाएको छ । चाँदी बिहिबार पनि सोहि मूल्यमा कारोबार भएको थियो ।
सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले निष्काशन गरेको आइपिओ बुधबार बिक्री प्रबन्धक एनआइसी एसिया क्यपिटलको कार्यालयमा बाँडफाँट भएको छ ।